သငျသညျအမှုအရာကိုယ့်ကိုယ်လုပ်နေတာသို့မဟုတ်တစ်ဖက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်ဖြစ်စေ, ငါသညျငါ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အတွက်အထူးအထောက်အကူဖြစ်စေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ကြောင်းအကြံဥာဏ်လေးကိုအပိုင်းပိုင်းပူဇော်ချင်ပါတယ်။ ဒုတိယနှစ်ခုပိုပြီးတိကျတဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်-အသက်အရွယ်စမ်းသပ်ချက်မှဖြစ်ကြသည်စဉ်အကွံဉာဏျ၏ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုအပိုင်းပိုင်း, မည်သည့်စမ်းသပ်မှုသက်ဆိုင်ပါသည်။
သင်တစ်ဦးစမ်းသပ်မှုလုပ်နေတာသောအခါအများအတွက်အကြံဥာဏ်ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးအပိုင်းအစကိုမဆိုဒေတာစုဆောင်းထားပြီးရှေ့တော်၌ကိုယ်တတ်နိုင်သမျှစဉ်းစားသင့်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒါကဖြစ်ကောင်းစမ်းသပ်ချက်အပြေးလေ့သုတေသီများမှသိသာပုံရသည်, သို့သော် (အခန်း2ကိုကြည့်ပါ) အကြီးကြီးဒေတာသတင်းရင်းမြစ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့နေသားတကျသူတို့အဘို့အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောသတင်းရင်းမြစ်နှင့်အတူအလုပ်အများစုကိုသင်ဒေတာများအပြီးပြုပေမယ့်စမ်းသပ်ချက်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်: သင်ဒေတာစုဆောင်းရှေ့တော်၌ထိုအလုပ်၏အများဆုံးလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ သငျသညျဒေတာစုဆောင်းမတိုင်မီဂရုတစိုက်စဉ်းစားရန်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အတင်းဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုမှာသင်ကအခြေခံအားဖြင့်သင်သည်လုပ်ဆောင်သွားရန်တံ့သောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖော်ပြရန်ရာ၌သင်တို့၏စမ်းသပ်မှုတစ်ခု Pre-ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအစီအစဉ်ကိုဖန်တီးမှတ်ပုံတင်ရန်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် (Schulz et al. 2010; Gerber et al. 2014; Simmons, Nelson, and Simonsohn 2011; Lin and Green 2016) ။
ယေဘုယျအကွံဉာဏျငါ၏ဒုတိယအပိုင်းအစဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောင့်, သင်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအားဖြည့်ကြောင်းစမ်းသပ်ချက်တစ်ခုစီးရီးဒီဇိုင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ်, အဘယ်သူမျှတစ်ခုတည်းစမ်းသပ်မှုစုံလင်ခြင်းရှိသွားကြောင်းဖြစ်တယ်, ။ ငါဒီ armada မဟာဗျူဟာအဖြစ်ဖော်ပြကြားဖူးတယ်; မဟုတ်ဘဲတဦးတည်းအကြီးအကျယ်တိုက်ဆောက်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေထက်, သင်ဖြည့်စွတ်အားသာချက်များနှင့်အတူငယ်များသင်္ဘောစာရေးတည်ဆောက်သင့်ပါတယ်။ Multi-စမ်းသပ်မှုလေ့လာမှုများဤမျိုးစိတ်ပညာအတွက်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များမှာ, ဒါပေမဲ့သူတို့တခြားနေရာရှားပါးဖြစ်ကြသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, အချို့ဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်များ၏အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ် Multi-စမ်းသပ်မှုပိုမိုလွယ်ကူလေ့လာနေစေသည်။
ယေဘုယျနောက်ခံပေးထား, ငါသည်ယခုဒစ်ဂျစ်တယ်အသက်အရွယ်စမ်းသပ်ချက်ဒီဇိုင်းကိုပိုမိုတိကျတဲ့ဖြစ်ကြောင်းအကြံဥာဏ်နှစ်ခုအပိုငျးပိုငျးပူဇော်ချင်ပါတယ်: သုည variable ကိုကုန်ကျစရိတ်ဒေတာ (အပိုင်း 4.6.1) ကိုဖန်တီးဖို့နဲ့သင့်ရဲ့ဒီဇိုင်း (အပိုင်း 4.6.2) သို့ကျင့်ဝတ်ကိုတည်ဆောက်စေ။